डान्सर बन्ने सपना बोकेकी १२ बर्षिय रियाले टिकटक बनाउने मोबाइल नपाएपछि गरिन आ’त्मह’त्या – Sandesh Press
July 7, 2021 528
चितवन जुटपानि स्थित एक परिवारमा निकै नै दु’खद खबर खटेको छ। जहा १२ बर्षिय बालिकाले आ’त्म’ह’त्या गरेकी छिन्। सामाजिक संजाल टिकटकले गर्दा अहिले धेरै मनिसहरुले आ’त्मह’त्या गरेको पाइन्छ। कसैले झु’न्दिएर आ’त्मह’त्या गरेको पाइन्छ भने कसैले पुलबाट हाम हालेको देख्न सकिन्छ। त्यस्तै १२ बर्षिय बालिका रियाले पनि झु’न्दिएर आ’त्मह’त्या गरेकी छिन्।
सानै उमेर देखि नाच्न मन पराउने रियाले अहिले टिकटक बनाउन नपाएर आ’त्मह’त्या गरेकी हुन्। ठुलो भएपछि राम्रो डान्सर बनेर धेरै पैसा कमाउने उनको इच्क्षा थियो। सानै उमेर देखि डान्स गरेर पछि काट्ट्रुन क्रु संग डान्स गर्ने उनको ठुलो धोका थियो। राम्रो बनेर राम्रो राम्रो टिकटक बनाएर हाल्ने उनको ठुलो शो’क थियो। टिकटक बनाउनको लागि उनि संग राम्रो मोबाइल नै थिएन ,त्यस कारणले उनले मलाई २० हजारको मोबाइल किनेर ल्याइदिन भनेकी थिइन्। घरमा बुबा आमाले छोरि सानै छ,यो पढ्न उमेर हो राम्रो संग पढ्नु पर्छ भनि मोबाइल किनिदिएका थिएनन। छोरिको जिद्दीको कारणले साउन मा किनिदिने आमाले बताएकी छिन्।
घरको आर्थिक अवस्था कम भएको हुनाले उनीहरुले मोबाइल किनिदिन सकेनन। नसक्दा रियाले मलाई मोबाइल किनेर दिने भए दिनु होइन भने म १५ गते झु’न्डि’एर मो’रिदिन्छु भनि आ’वेगमा भनिन र उनले १७ गरे आफ्नो प्रण त्या’ग गरिन। आमाले मैले साउनको ५ गते सम्म किनिदिन्छु भन हुन्छ भनेकी थिइन् रियाले र आफ्ना साथिहरुलाई मलाई घरमा १५ गते सम्म मोबाइल किनिदिनन भनि म झु’न्दिएर मा’रिदिन्छु भनेकी रहेछिन।
६ कक्षामा पढ्ने १२ बर्षकि रिया सानै भएको कारणले पनि पढाई बिग्रिन्छ भनि घरपरिवारले उनलाई मोबाइल किनिदिएका थिएनन। रियाले आफ्नी दिदिसंग मैले मोबाइल किने भने हामि दिदिबहिनीले धेरै टिकटक भिडियो बनाउने र धेरैपैसा कमाएर बुबाआमालाई पाल्ने सुख दिने भनेकी रहेछिन् । रिया घरकी कान्छी छोरि हुन् ,उनलाई केहि कुराको कमि भयो भने उनले मलाई हेला गरे ,कसैले माया नै गरेनन भन्ने सोच्ने गर्थिन। पुरा जानकारी भिडियो हेरेर थाहा पाउनुहोस।
Prevखोलामा पहिरोपछि आएको बाढीले बगाउँदा इन्जिनियरसहित ३ जना बेपत्ता
Nextबाहिर निस्किदै हुनुहुन्छ ? सावधान ! मनसुन फेरि सक्रिय, पाँच प्रदेशमा ‘ सतर्क रहन आग्रह
जीवनसाथीको भाग्य चम्काउने ३ राशि
धन लाभ चाहनुहुन्छ ? यस्तो मोती धारण गर्नाले अपेक्षित लाभ प्राप्त हुन्छ